Ahoana ny fampandehanana ny Pluto TV | la-manette.com
Ahoana ny fomba fampandehanana ny Pluto TV
12 février 2021 feh JEAN-MICHEL CAPPIN
Tsy toy ny maro mivantana eny an-tsena, Pluto TV dia maimaim-poana tanteraka ary manolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra an'arivony sy sarimihetsika, voalamina ao anatin'ny rafi-pandaminana mirindra sy lojika. Na dia tsy mitaky fisoratana anarana aza ny Pluto TV mba hisitraka ny tombontsoa rehetra ananany, ny fisoratana anarana dia ahafahanao manamboatra ny traikefanao manokana.
Ahoana no fomba fampahavitrihana ny Pluto TV?
Ny hany antony anolorany fisoratana anarana dia ny manafina sy manala ny fantsona, ny fantsona ankafizinao ary manamboatra ny fitaovanao Android toy ny fanaraha-maso lavitra. Ny fisoratana anarana dia miantoka fa ny safidinao dia voatahiry ao amin'ny kaontinao maimaim-poana. Amin'ity lahatsoratra ity, ho hitanao ny fomba fametrahana sy fampahavitrihana ny serivisy Pluto TV anao amin'ny fitaovana isan-karazany. Andao !
Ao anatin'ny ezaka hahatonga ny Pluto TV ho vahaolana ho an'ny rehetra, ny serivisy dia nafindra ary natao mifanaraka amin'ny sehatra isan-karazany. Ny fitaovana amin'izao fotoana izao dia toy izao manaraka izao:
Telefaonina sy takelaka Android, ary koa Android TV: Azonao atao ny misintona ny fampiharana ofisialy avy amin'ny Google Play eto.
iPad ary iPhone: Ampidino ny fampiharana ici .
4 ny foira RENALA faha dimy sy Fety RIFATSE famokarana fitaovana Apple TV: Azonao atao ny mahita ny fampiharana amin'ny iTunes .
Ny takelaka Amazon Kindle sy Fire isan-karazany, ary koa Fire TV sy Fire TV Stick: azonao atao alaivo eto ny fampiharana ofisialy.
Vizio, Samsung, ary Sony smart TV maro no manana ny fampiharana napetraka mialoha raha misy.
solosaina PC Windows sy Mac: Ampidino ny fampiharana ho an'ny rafitra fiasanao ici .
PlayStation 4: Ny fampiharana dia hita ao amin'ny Playstation Store an'ny fitaovana.
Playstation 3: Azo alaina ny fampiharana ici na amin'ny alàlan'ny Playstation Store amin'ny console.
Xbox One: Misy ny fampiharana ici na amin'ny alalan'ny Xbox Games Store (Xbox Live Marketplace taloha) amin'ny console lalao.
Browsers: Tsy mila fametrahana ny fampiharana rehefa miditra amin'ny alàlan'ny ny tranokala Pluto TV amin'ny PC, Mac na fitaovana finday.
Ankoatra ny fisiany any Frantsa, ny Pluto TV dia misy any amin'ny firenena hafa. Na izany aza, ny fifampiraharahana mifandraika amin'ny zon'ny fampielezam-peo ho an'ny votoaty manokana dia mety hametra ny fidirana amin'ny fantsona sasany sy votoaty sasany avy amin'ny firenena iray mankany amin'ny iray hafa. Ireo mpijery iraisam-pirenena dia afaka misintona ny fampiharana desktop avy amin'ny "International Desktop App ” eto.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fampifandraisana na fanesorana ny kaontinao Nintendo amin'ny kaontinao Epic Games
Misoratra anarana amin'ny Pluto TV
Mora ny misoratra anarana amin'ny lampihazo. Azonao atao izany amin'ny fanarahana ireto dingana manaraka ireto:
dingana 1 : Tsidiho ny tranokalan'ny Pluto TV raha te hiditra na hampiasa ny fampiharana amin'ny findainao. Tsindrio ny safidy "Register".
dingana 2 : Fenoy ny fampahalalana ilaina ary tsindrio ny "fisoratana anarana maimaim-poana".
dingana 3 : Vonona ianao ! Azonao atao ny misintona ny fampiharana hijerena fampisehoana mahafinaritra tsy misy vidiny.
Mila manetsika ny Pluto TV ve aho?
Tsara ny Pluto TV satria maimaim-poana izy io ary manana endri-javatra maro. Soa ihany fa ny sasany amin'ireo endri-javatra ireo dia ahitana ny fampiasana ny findainao ho toy ny fanaraha-maso lavitra ary manampy ny ankafizinao. Raha hampiasa ireo fanampiny dia tsy maintsy manetsika ny kaontinao Pluto TV ianao amin'ny fitaovana izay fidinao hijerena ny atiny.
Ara-teknika, amin'ny 2021, tsy mila manetsika ny serivisy ianao. Ny Pluto TV dia manana dingana fisoratana anarana, saingy tsy manome tombony na fiasa izany amin'izao fotoana izao. Voalaza fa ny kaonty iray dia afaka manafina sy manala saron-tava fantsona, mankasitraka sy manaratsy ny fantsona, ary mampiasa ny fitaovana Android anao ho fanaraha-maso lavitra.
Na izany aza, ireo fampiasa ireo dia efa tsy misy intsony ary tsy misy. Sarotra ny milaza hoe rahoviana no azo ampiasaina ireo safidy ireo, saingy amin'izao fotoana izao dia tsy ilaina ny misoratra anarana. Raha mbola manapa-kevitra ny hamorona kaonty ianao dia hahazo fampandrenesana momba ny fanavaozana rehetra rehefa mitranga izany. Amin'izao fotoana izao, tsy hita ny fampiasa rehetra an'ny "My Pluto", afa-tsy ilay kisary miendrika fo izay misy foana ary azo kitihina amin'ny Android, na dia tsy manao na inona na inona aza.
Afaka mijery Pluto TV amin'ny fitaovana maro tsy misy fetra ianao.
Na dia tsy ilaina aza izany amin'izao fotoana izao, dia mbola afaka manetsika ny serivisy ianao rehefa misy ireo endri-javatra. Mba hampavitrika ny Pluto TV dia araho ireto dingana ireto:
Vakio ihany koa: Ahoana ny filalaovana Super Mario Sunshine amin'ny iPad miaraka amin'ny emulator mahagaga
dingana 1 : Mifandraisa amin'ny Pluto TV amin'ny fandehanana any amin'ny tranokala My Pluto TV.
dingana 2 : Tadiavo ny kaody 6 isa ilaina mba hampavitrika ny serivisy.
Dingana 3: Azonao atao ny manetsika ny serivisy amin'ny alàlan'ny fampiharana amin'ny findainao na amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny tranokala fampahavitrihana Pluto ary manaraka ny torolàlana.
Misy fomba roa handefasana TV Pluto amin'ny Chromecast-nao. Afaka mandeha amin'ny Chrome amin'ny solosainao ianao na mampiasa ny fampiharana finday Pluto TV. Andeha hojerentsika ny fomba hanaovana izany.
Chromecast avy amin'ny Internet
Araho ireto dingana ireto mba handefasana Pluto TV amin'ny Chrome.
Édingana 1: Alefaso ny Chrome amin'ny solosainao.
dingana 2 : Tsidiho ny tranokalan'ny Pluto TV ary midira raha ilaina.
dingana 3 : Tsindrio ny kisary “More” eo amin'ny zoro ambony havanana amin'ny varavarankelin'ny navigateur.
dingana 4 : Safidio ny safidy “Cast…” ao amin'ny menio.
dingana 5 : Fidio Chromecast. Raha toa ka efa mifandray izy, dia misy kisary milaza fa mavitrika izy io.
Chromecast avy amin'ny fitaovana finday
Araho ireto dingana ireto mba handefasana Pluto TV avy amin'ny findainao. Ity torolàlana ity dia mihatra amin'ny fitaovana Android sy iOS.
Sokafy ny Pluto TV amin'ny fitaovanao.
Mandehana any amin'ny fantsona tianao halefa.
Tsindrio ny kisary "Alefaso" eo amin'ny zoro havanana ambony.
Safidio ny Chromecast amin'ny lisitry ny fitaovana fanariana misy.
Fampahavitrihana ny dikanteny mihidy
Ity ny fomba ahafahan'ny caption mihidy amin'ny sehatra samihafa.
Ity torolàlana ity dia mihatra amin'ny telefaona Android sy tablette.
Alefaso ny Settings.
Safidio ny "Accessibility".
Tsindrio ny "Santitra".
Tsindrio ny bokotra slide raha hampavitrika ny dikanteny mihidy.
Manomboka Pluto TV.
Peho ny efijery.
Tsindrio ny kisary "CC".
Fidio ny fiteny tianao.
Ity ny fomba ahafahan'ny caption mihidy amin'ny fitaovana Amazon.
Alefaso ny kiran'ny fidirana amin'ny Fire TV.
Mankanesa any amin'ny fizarana "Subtitles" ary ampiharo izany.
Mandehana any amin'ny Pluto TV ary tsindrio ny bokotra Menu (afovoany) eo amin'ny fanaraha-maso lavitra amin'ny fahitalavitra.
Fidio ny fiteny haseho ho an'ny dikanteny.
Toy izao ny fomba famelomana lohateny mihidy amin'ny fitaovanao Roku TV.
Sokafy ny Pluto TV amin'ny fitaovanao Roku.
Tsindrio ny bokotra "*" (asterisk) amin'ny fanaraha-maso lavitra. Hanokatra ny menu Options izany.
Mandehana any amin'ny "Closed captioning".
Tsindrio ny zana-tsipìka "Right" sy "Left" hisafidianana amin'ny lisitry ny dikanteny misy.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fanamboarana azy rehefa tsy mifandray amin'ny Wi-Fi ny PS4
Misy asa fikarohana ve ao amin'ny Pluto TV?
Mampalahelo, ary saika tsy hay hazavaina, TSY misy fiasa fikarohana ao amin'ny Pluto TV. Tsy afaka mikaroka ny mpitari-dalana amin'ny fantsona ianao, afaka mijery fotsiny. Mazava ho azy fa fahasahiranana kely izany, fa aza misalasala mijery ny sasany amin'ireo fahafaha-manao atolotry ny Pluto TV mba hahafantarana bebe kokoa. Misy ihany koa ny vahaolana avy amin'ny antoko fahatelo, JustWatch, izay manolotra fizarana ho an'ny Pluto TV izay miparitaka sy azo karohina ny ankamaroan'ny votoatin'ny tranokala.
Ho fehiny, mitombo haingana ny isan'ny fantsona misy sy ny habetsaky ny votoaty amin'ny fangatahana ao amin'ny Pluto TV. Raha jerena fa mahazo mpampiasa vaovao amin'ny tahan'ny tsy mampino ny tranokala, dia azo heverina fa eto ny Pluto TV.
Genshin Impact: Ahoana ny fahazoana Primogems